» “पल शाहलाई अब के हुन्छ स,जाय,धरौ,टी वा स,फाइ ? के पलले अप,राध गरेकै हुन त ? पुर्व डियसपीले खुलाए वास्तविकता (भिडियो सहित) “पल शाहलाई अब के हुन्छ स,जाय,धरौ,टी वा स,फाइ ? के पलले अप,राध गरेकै हुन त ? पुर्व डियसपीले खुलाए वास्तविकता (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
“पल शाहलाई अब के हुन्छ स,जाय,धरौ,टी वा स,फाइ ? के पलले अप,राध गरेकै हुन त ? पुर्व डियसपीले खुलाए वास्तविकता (भिडियो सहित)
2022, March 1st, Tuesday
हाम्रोखबर संवाददाता 68 Views
“अभिनेता पल शाह प्रक,रण पछिल्लो समय कलाक्षेत्रमा चर्चामा रहेको बिषय हो । सामान्य कुराबाट सुरु भएको शाह प्रक,रण अहिले का,नुनी प्रक्रि,यामा पुगिसकेको छ । पल शाह प्रकर,णका बिषयमा अधिकांश कलाकर्मी मौ,न जस्तै छन् ।
“सर्वसाधारणले भने यस बिषयमा सामाजिक संजालमा विभिन्न टिकाटि,प्पणी गरिरहेका छन् ।अभिनेता पल शाह प्रक,रणमा धेरै चर्चित व्यक्तीले आफ्नो बिचार राखेका छन यस्तै क्रममा पुर्व डियसपीले पनि आफ्नो बिचार राखेका छन ।
” उनले भनेका छन प्रहरी र का,नुनलाई आफ्नो काम गर्न दिउ यदी पल ग,लत छैनन भने किन ड,राउनु स,फाइ पाउछन । कानु,नमा बिश्वास राख्नु पर्छ । उनले के के भने त हेरौ भिडियो